Ungasilawula njani nasiphi na isixhobo ekhayeni lakho nge-Alexa kunye neKhaya likaGoogle | Iindaba zeGajethi
Ungasilawula njani nasiphi na isixhobo ekhayeni lakho nge-Alexa kunye neKhaya likaGoogle
Ngaba wakha wanemvakalelo yokuba zininzi kakhulu iiqhina lolawulo kwigumbi lakho lokuhlala? Ngaba uphupha ngokukwazi ukulawula umabonwakude, imeko yomoya okanye ukufudumeza ngokuthe ngqo kunye ne-Alexa? Namhlanje sifuna ukukubonisa ukuba ungasisebenzisa ngokulula njani nasiphi na isixhobo esisebenzisa indawo ekude nge-Alexa kunye neKhaya likaGoogle. Ekuphela kwemfuneko sisixhobo esincinci esibiza imali engaphantsi kwe-10 euro kwaye silandela ukumiselwa kwethu uya kuba nakho ukuxelela i-Alexa ukuba yehlise iqondo lobushushu lomoya, ucime umabonwakude kunye nezinye izinto ezininzi onokucinga ngazo, hlala nathi kwaye ufumane ngaphandle kwesi sifundo seendaba seGadget News.
1 Broadlink -I-RF engabizi kakhulu kunye nolawulo lwe-infrared
2 Uqwalaselo lweBroadLink
3 Sebenzisa i-BroadLink nge-Alexa
Broadlink -I-RF engabizi kakhulu kunye nolawulo lwe-infrared
Into yokuqala esiza kuyidinga sisixhobo esiya kusibiza ngokuba yi "Broadlink", ezi zizixhobo eziguqula nje ii-odolo esizinika ukuba zibe ngumqondiso we-IR (infrared) okanye RF (radio frequency) endaweni yeemfuno esinazo. Uninzi lwezi zixhobo zineBluetooth kwaye enye yezona zinto zaziwayo yiBestCon, Nangona kunjalo, uya kufumana amanqaku amaninzi kwiAmazon, eBay, Aliexpress nakwezinye iivenkile ezikwi-Intanethi eziza kukuvumela ukuba ufumane enye yezi zinto zincinci. Njengoko besitshilo, sikhethe i-BestCon RM4C Mini eyi-BroadLink ehambelanayo.
Thenga i-BroadLink yexabiso eliphantsi.
Esi sixhobo sasibiza ngaphantsi kwe-10 euro kwaye sayithenga kwi-eBay. Inguqulelo "encinci", ke uluhlu lwe-IR lumalunga neemitha ezisibhozo. Umahluko kunye nezinye iimodeli ezinkulu zombini ubungakanani kunye nendawo apho sibeka khona isixhobo. Njengoko ubonile kuvavanyo, kubonakala ngathi ezo mitha zisibhozo zanele ukusetyenziswa kwesiqhelo kwigumbi lokuhlala. Sikhethe le modeli yamanqaku amahle afunyenwe kwi-intanethi, kodwa ungabona kwividiyo ngaphezulu kwe-unboxing yethu kunye nokuqala kokuvela.
Sifumana isixhobo esihambelana neenkqubo I-IR ekhombisa izinto ezininzi kunye ne-RF kunye no-802.11.bgn uqhagamshelo lwe-WiFi, Ewe kunjalo, kufuneka sichaze ukuba iyahambelana kuphela nonxibelelwano lwe-2,4 GHz, ke ayizukusebenza nonxibelelwano oluqhelekileyo lwe-5 GHz oluxhaphake ngoku ekhaya kwaye lubonelela ngesantya esiphezulu, nangona luhlobo olubi kakhulu. Inoluhlu lwe-IR lwe-38 kHz kwaye iyahambelana zombini i-iOS kunye ne-Android ngokusebenzisa i-app ye-BroadLink, yendawo yonke kwaye ihlaziywe kakuhle. Kubalulekile ukuba sikhethe imveliso ehambelana nomgangatho we-BroadLink.
Kuyamangalisa ukuba compact, Kuphakame nge-4,6 cm, 4,6 cm ubude kwaye 4,3 cm ubukhulu. Ibhakethi elincinci elakhiwe ngeplastiki ngxi, inesalathiso se-LED ngaphambili, ngelixa ngasemva kukwizibuko microUSB (Intambo ifakiwe) kunye negalelo lamandla e-5V. Ubunzima bungaphantsi kwe-100 gram kwaye iadaptha ikwabandakanyiwe kwiphakheji ukuze sikwazi ukuyibeka nokucima udonga ngokulula ngenkqubo yokujija, nangona kunjalo ngokunyaniseka, inobunzima obuncinci kangangokuba andithandabuzi ukuba inokudityaniswa eludongeni macala omabini iteyipu.
Elinye icandelo elisitsalele ekufumaneni esi sixhobo ukongeza kukuhambelana kwayo neBroadLink kukuba inedatha ebaluleke kakhulu efini, Ke ngoko, kuya kufuneka sazise uhlobo lwemveliso kunye nophawu lwayo ukuze isinike uthotho lolawulo, kubalulekile ukuba inokuba nazo ezi ntlobo zemigangatho. Kancinci kule meko, gcinani engqondweni ukuba igumbi lakho lokuhlala likhulu kakhulu okanye linemiqobo emininzi, kuya kufuneka ukhethe imodeli "Pro" okanye enkulu, khumbula ukuba umgama wokusetyenziswa ziimitha ezisi-8.
Nje ukuba sifake usetyenziso lwe-BroadLink (Android / iOSSimane sixhuma isixhobo kwinethiwekhi kwaye sivule usetyenziso kwaye silandele Amanyathelo alandelayo:
Siqinisekisa ukuba i-smartphone yethu iqhagamshelwe kwinethiwekhi ye-2,4 GHz.
Sifaka kwi-BroadLink kwaye siyabona ukuba isibonakaliso se-LED siyabhanya.
Sijonge kwi "I-BroadLink" ukuze usebenzise iakhawunti.
Cofa ku "Yongeza isixhobo" (usetyenziso mhlawumbi lusebenza ngesiNgesi kuphela).
Sinika iimvume eziyimfuneko kwisicelo.
Senza uphando kwaye xa isicelo sikucela, sifaka ipaswedi yenethiwekhi ekhethiweyo yeWiFi.
Silinde isixhobo ukuba sihlaziye, sikhuphele kwindawo yogcino kwaye sigqibe yonke imisebenzi yangasemva.
Ngoku siqwalasele isixhobo sethu, inyathelo elilandelayo iya kuba kukongeza ulawulo, kuba oku kufuneka sikhe nje nqakraze yongeza izixhobo zombane kwaye ulandele le miyalelo ingezantsi:
Sikhetha uhlobo lwesixhobo esifuna ukusilungiselela.
Sifaka uphawu lwefowuni kwinjin yokukhangela kwaye siyikhethe.
Izakusinika ezintathu zolawulo olufanelekileyo, sivavanya amaqhosha ukuqinisekisa ukuba yonke imisebenzi yenziwa ngokuchanekileyo de sicinezele iqhosha eliluhlaza lolawulo olusebenza ngokuchanekileyo.
Si ulawulo lwethu longezwe kwi-BroadLink kwaye sinokulawula into esiyifunayo kwisicelo, kodwa eyona nto inomdla ukuyenza isuka kwi-Alexa.
Sebenzisa i-BroadLink nge-Alexa
Inyathelo elilandelayo kukuba Sinika ii-odolo kwi-Alexa kwaye yenza isenzo ngokungathi ngumyalelo wethu kodwa ngelizwi, ngala manyathelo alula:
Sivula isicelo seAlea kwaye siye kwicandelo Izakhono.
Sikhangela isakhono se "BroadLink", siyinike imvume, kwaye sidibanise iakhawunti yethu yomsebenzisi.
Siya kwicandelo lezixhobo, cofa ku "+" kwaye ujonge izixhobo, silindele ukuba sigqibe isenzo.
Ngokuzenzekelayo zonke izixhobo ze-BroadLink yethu efumaneka nge-Alexa ziya kuvela, ukuba sifuna sizicwangcise okanye sizishiye zinjalo, ukuthanda kwethu.
Ngoku ngokunika imiyalelo kwi-Alexa iya kuzenza ngokuzenzekelayo, Kufuneka nje siqiniseke ukuba sikhethe ulawulo oluchanekileyo kwi-BroadLink. Uya kuba nakho ukwenza yonke into kulawulo oluqhelekileyo lwesixhobo sakho ekuvumela kwaye nakwezinye izinto, eminye yemisebenzi eqhelekileyo:
Alexa, vula isixhobo somoya
I-Alexa, setha i-air conditioner kwi-25 degrees
Alexa, cima isixhobo somoya
I-Alexa, beka isibali xesha kwisibulali-moya
Alexa, setha isixhobo sokupholisa umoya ukuze uvule ...
Alexa, vula / ucime iTV
I-Alexa, iTV efanayo
Siyathemba ukuba esi sifundo silula sikuncedile kwaye ukuba unawo nawaphi na amathandabuzo, sebenzisa ividiyo ekuboniswa kuyo yonke into inyathelo ngenyathelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Ungasilawula njani nasiphi na isixhobo ekhayeni lakho nge-Alexa kunye neKhaya likaGoogle
I-O2 inyusa isantya sefayibha ukuya kwi-600 Mb symmetric simahla
I-DTT itshintsha amaza ombane: Uya kuyeka ukukwazi ukubukela umabonwakude ukuba awuyibuyisi i-eriyali